မူလစာမျက်နှာ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ဤ site နှစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်:
ပထမဦးစွာကျနော်တို့ညှိ-up, အချို့ပဲ့ချိတ်လှေမော်တာ။ ဤ site အခြားသောသူတို့သည်သင်တို့ဝန်ဆောင်မှုကို manual ထဲတွင်ရှာတွေ့မယ်လို့ထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုခြေလှမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားဖြင့်အတူတူပင်ပြုပါကကူညီမယ့်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကြောင်းတစ်ခုပဲ့ချိတ်မော်တော်ရှိပါကသင်သည်ညှိ-up, သင့်ရဲ့ပဲ့ချိတ်လှေမော်တာကိုကူညီဖို့ဒီ site ကိုသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
ဒုတိယအချက်: ဤ site ကို site ကိုစျေးဝယ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းများသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါအယူအဆသည်သင်၏ဂျွန်ဆင် / Evinrude / OMC / BRP မော်တာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများများစာရင်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအထကျမှာ "မော်တော်များစာရင်း" menu ကို link ကို click နှိပ်ပြီးလျှင်, သင်စာရင်းကို၌သင်တို့၏မော်တာရှာပြီးသင်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှာပြီးအတွက်အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီချက်အရကူညီရန် Amazon နဲ့ eBay ကိုလင့်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့မော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၏စာရင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည် လုပ်ငန်းစဉ်။
ဤ site အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသက်ပြန်ရှင်ဖို့သူတို့ရဲ့အဟောင်းကိုပဲ့ချိတ်လှေမော်တာကိုဆောင် ခဲ့. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 13 ကျော်စတင်ခဲ့ပြီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့်လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့တယ်။ ပိုမိုဒီဂန္မော်တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ပိုသူတို့ကိုငါနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်။ ဒီ site တစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသကဲ့သို့, ငါသည်သင်တို့၏ခံစားအသစ်စီမံကိန်းများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဤ site အလွန်အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤ site အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်။ သင်ကဘာသာစကား selector ကိုသုံးပါနှင့် 120 ဘာသာစကားများကျော်ကနေရှေးခယျြနိုငျပါသညျ! သင်တစ်ဦးအမေဇုံသို့မဟုတ်ကို eBay link ကို click နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏တည်နေရာ, ငွေကြေး, နှင့်ဘာသာစကားများအတွက်သင့်လျော်သော site ကိုမှညွှန်ကြားရ။ ပဲ့ချိတ်လှေမော်တာနိုင်ငံရေး, အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်ရှိဟန်, ဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားကန့်သတ်နှင့်ဤ site ကိုခံစားရန်လူတိုင်းအတွက်တည်ရှိ။
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့အစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးဝယ်လင့်များ အသုံးပြု. ဒီ site နှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုကိုထောကျပံ့ကူညီပေးပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ Amazon.com ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုကတဆင့်မဝယ်ဘာမှဒီ site ကိုထောကျပံ့ကူညီပါလိမ့်မယ်။ သူတို့မကြာခဏယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချသူထံမှတူညီသောအစိတ်အပိုင်းကိုစာရင်းပြုစုသောကြောင့်, Amazon.com သင်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်ပါ။ eBay ကိုတစ်ဦး bargain စျေးနှုန်းအဘို့အကြည့်ဖို့ကြီးစွာနေရာအရပ်အဖြစ်ရှားပါးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်မကြာခဏဖဲဝေသူသို့မဟုတ်လက်လီစျေးနှုန်းစာရင်း, Amazon.com စျေးနှုန်းနဲ့ eBay စျေးနှုန်းအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏လင့်များအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ငွေအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အမေဇုံသို့မဟုတ်ကို eBay လင့်များသုံးပြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဝယ်ဖို့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဒီဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းများနှင့် hosting အခကြေးငွေရန်ပုံငွေကိုသုံးပါအကြောင်းကို 5% ကော်မရှင်ရ။ သငျသညျထုတျကုနျမဝယ်နဲ့ဒီ site ကိုထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏လင့်များအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ကရန်မပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်ရှိပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းအထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ "မှတ်ချက်" menu ကိုလင့်ခ်မှာကြည့်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် သင်၏လှေမော်တာကိုပြုပြင်ပြီးလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ထံငွေများစွာမသုံးဘဲရေကိုပြန်ယူနိုင်သည်။